Azụmaahịa gị ọ na-agbaso ụkpụrụ omume kacha mma nke Social Media? | Martech Zone
Iwu mgbasa ozi ọha na ezeOkwu a na-eme m uta. O yiri ka enwere onye na-anwa itinye usoro iwu n'ihe niile n'oge a Enweghị m ike ịnagide ya. N'ezie enwere omume adịghị anakwere na ntanetị na n'ịntanetị offline mana ịma mma nke ikpo okwu bụ na ma ị na-agbaso ihe akpọrọ iwu, ị ga-ahụ nsonaazụ ya.
Nke a bụ ihe atụ… M na-eso nnukwu onye na-eweta ọrụ email na Twitter ma ha ejiri DMD buru ibu ugboro abụọ maka mgbasa ozi na-abịa. Echeghị m na mgbasa ozi ahụ ma enyeghị m ikike ka a kpọsaa ya, n'ihi ya enwere ike ịgbagha na ha KWURU m - ụdị ịkwa emo. Fọdụ ndị folks nwere ike iti mkpu igbu ọchụ na ụlọ ọrụ nke ntọala ha dabere na azụmaahịa dabere na ikike na-etinye ihe na igbe ozi nke onye ọ bụla nke ha na-arịọghị. Enweghị m mkpesa, naanị m leghaara mgbasa ozi ahụ anya.
Mgbe ahụ, m na-eche… ọ rụrụ ọrụ? Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ ahụ a na-ekwu okwu nwere ike ịgbanwe ụfọdụ ndị na-eso ụzọ site na ịkwanye SPAM a ma nsonaazụ ya enweghị mkpesa ma ọ bụ ndị na-achọghị ịgbaso, ọ wutere ihe ọ bụla? Nke ahụ bụ nsogbu nke ụkpụrụ, ọ na-emetụta usoro iwu nke onye ọ bụla ekwenyeghị iji jikwaa nsogbu nwere ike ọ gaghị adị. Anaghị m agbaso iwu ụkpụrụ, m gaghịkwa eme. Ana m agbaso iwu nke m ma ndị mmadụ nwere ike iji obi m niile soro m ma ọ bụ wezuga m ka ha si chọọ (na ọtụtụ n'ime ha na-eme!).
a ozi sitere na TollFreeForwarding na-akọwapụta usoro mmekọrịta ọ bụla na ụkpụrụ omume na nke ọ bụla. Ma ịchọrọ itinye aka na hashtags Twitter na Instagram ma ọ bụ dozie isi mmalite gị na Pinterest, soro iwu ndị a, ị ga - ahụ onwe gị na mmekọrịta na --enwe obi ụtọ, afọ ojuju!
Adabaghị na iwu nke mgbasa ozi mgbasa ozi nwere ike inye azụmahịa na ikpughekwu ma, ikekwe, nsonaazụ kacha mma. Kedu ihe ị chere?
Tags: Facebookụkpụrụ facebookgoogle plusgoogle +ụkpụrụ + googleLinkedInezigbo ụkpụrụPinterestụkpụrụ mara mmaiwu nke mgbasa oziusoro mgbasa ozi kacha mmaụkpụrụ mgbasa oziusoro mgbasa ozi kachasị mmana-elekọta mmadụ media iwuTwitterụkpụrụ ọma twitter
Sep 6, 2014 na 1: 31 AM
Ee nke ahụ bụ ihe ọ funụ na ị gafere ihe omuma ihe omuma gi yana ihe omuma nke oma !!
Ọ ga-amasị m ịkele gị maka ịkekọrịta post ahụ na anyị !!